ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီး ၁၀ ခု - Thutazone
ယနအေ့ခြိနျမှာတော့ နညျးပညာဟာ ကမ်ဘာကွီးကိုမောငျးနှငျလကျြရှိပွီး ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာစီးပှားရေးရဲ့ မရှိမဖွဈအရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍတဈခုဖွဈနပေါပွီ။ ကှနျပြူတာဟာ့ဒျဝဲ ဆော့ဝဲ ၊ အီလကျထရောနဈ ၊ အငျတာနကျ ၊ ဆကျသှယျရေး စတဲ့နညျးပညာတှဟော အခွားစီးပှားရေး လုပျငနျးတှကေိုပါ ထောကျပံ့ပေးလြှကျရှိပါတယျ။ ဒီတခါတော့ နညျးပညာခတျေလို့ တငျစားချေါဝျေါကွတဲ့ ယနခေ့တျေရဲ့ အကွီးဆုံးနညျးပညာကုမ်ပဏီကွီး ၁၀ခု (၂၀၁၉ ခုနှဈ ဝငျငှစောရငျး အရ) ရဲ့အကွောငျးကို ကို ဗသုသုတ အနနေဲ့ ဝမြှေလိုကျပါတယျ။
၁၀ ။ Sony
နံပါတျ ၁၀ မှာ ရပျတညျနတောကတော့ ဂပြနျနညျးပညာ ကုမ်ပဏီကွီးဖွဈတဲ့ ဆိုနီကုမ်ပဏီဖွဈပါတယျ။ အီလကျထရောနဈ ၊ ဗီဒီယိုဂိမျး ၊ ရုပျရှငျဆိုငျရာ ထုတျကုနျ နဲ့ ဆကျသှယျရေးပစ်စညျးတှကေို ထုတျလုပျနတေဲ့ ဆိုနီကုမ်ပဏီကွီးကို လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး ၇၄နှဈ (၁၉၄၆ ခုနှဈ) ကတညျးက စတငျတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကုမ်ပဏီရဲ့ရုံးခြုပျကတော့ မွို့တျော တိုကြိုရဲ့ Minato မှာ အခွစေိုကျပါတယျ။
နညျးပညာ ထုတျကုနျတှကေိုသာမက အာမခံ ၊ ဘဏျ ၊ ကွျောငွာအဂေငျြစီ နဲ့ နကျဝကျဆိုငျရာ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးပေါငျးမြားစှာကိုလညျး လုပျကိုငျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအမြားစုမှာ ရုံးခှဲမြားဖှငျ့လှဈထားပွီး ဝနျထမျးပေါငျး ၁၁၄၄၀၀ ဦးခနျ့ ရှိတဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးဖွဈပါတယျ။ ဆိုနီကုမ်ပဏီရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၇၈ဘီလြံ ဖွဈပါတယျ။
IBM ရဲ့ အရှညျကောကျက International Business Machines Corporation ဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျရဲ့ အကွီးဆုံးနညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတခုဖွဈပွီး ရုံးခြုပျက နယူးယောကျ Armonk မှာတညျရှိပါတယျ။ နှဈပေါငျး ၁၀၉နှဈကွာ သကျတမျးရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးဖွဈကာ နိုငျငံပေါငျး ၁၇၀ နိုငျငံမှာ လုပျငနျးခှဲတှရှေိနပေါတယျ။
ကှနျပြူတာ ကှနျပြူတာဟာ့ဒျဝဲ ဆော့ဝဲ ထုတျကုနျမြားထုတျလုပျနသေလို Cloud computing နဲ့ Artificial intelligence နယျပယျတှမှောလညျး ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးတှေ လုပျကိုငျလြှကျရှိပါတယျ။ ဝနျထမျးပေါငျး ၃၅၂၆၀၀ ဦး နဲ့ လညျပတျလြှကျရှိတဲ့ IBM ကုမ်ပဏီကွီးရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၇၉ . ၅ ဘီလြံဖွဈပါတယျ။
နံပါတျ ၈ နရောမှာရှိနတောကတော့ လြှပျစဈ ၊ အီလကျထရောနဈ နဲ့ စကျမှုပိုငျးဆိုငျရာ ထုတျကုနျတှမှော ကမ်ဘာကြျောတံဆိပျတခုအဖွဈ ခိုငျခိုငျမာမာရပျတညျနတေဲ့ Hitachi ဖွဈပါတယျ။ ဂပြနျနညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးဖွဈတဲ့ Hitachi ကို လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျး ၁၁၀ခနျ့ (၁၉၁၀ခုနှဈ) ကတညျးက စတငျတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ရုံးခြုပျတှကေတော့ တိုကြိုမွို့ Marunouchi နဲ့ Chiyoda-ku ရပျကှကျတှမှော ရှိနပေါတယျ။
အီလကျထရောနဈ ၊ စကျမှု ၊ တယျလီကှနျ ၊ Power plants ၊ ဓာတျလှကေား ၊ စကျလှကေားတှသောမက စူပါကှနျပြူတာတှကေိုပါ ထုတျလုပျပေးလြှကျရှိပါတယျ။ ဒါအပွငျ ငှကွေေးပိုငျးဆိုငျရာ Consulting ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးတှကေိုလညျး လုပျဆောငျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးဖွဈပါတယျ။ ဝနျထမျးပေါငျး ၃၀၇၂၀၅ ဦးနဲ့ လညျပတျလြှကျရှိတဲ့ Hitachi ကုမ်ပဏီကွီးရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၈၅.၅ ဘီလြံ ဖွဈပါတယျ။
၇။ Dell Technologies
Dell နညျးပညာကုမ်ပဏီကို ၁၉၈၄ ခုနှဈက Michael Dell ကတညျထောငျခဲ့ပွီး ကှနျပြူတာတှထေုတျလုပျရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာတော့ နောကျထပျနညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတခုဖွဈတဲ့ EMC Corporation နဲ့ ပေါငျးလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ Dell EMC ဆိုပွီးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ရုံးခြုပျကတော့ အမရေိကနျ တကျဈဆကျပွညျနယျ Round Rock မှာ တညျရှိပါတယျ။
ကှနျပြူတာ ၊ စမတျဖုနျး ၊ တီဗီ၊ ဆာဗာ ၊ storage ၊ ဆော့ဝဲ နဲ့ နကျဝကျပိုငျးဆိုငျရာ ထုတျကုနျတှကေို ထုတျလုပျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးဖွဈပါတယျ။ ဝနျထမျးပေါငျးအနနေဲ့ ၁၅၇၀၀၀ ဦးရှိနတေဲ့ Dell ကုမ်ပဏီရဲ့ ဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၉၀ ဘီလြံ ဖွဈပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံရဲ့ အကွီးဆုံးနညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးဖွဈတဲ့ Huawei ကတော့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ၆ မှာရှိနပေါတယျ။ Huawei ကုမ်ပဏီကို ၁၉၈၇ ခုနှဈမှာ Ren Zhengfei က ဒျေါလာ ၅၀၀၀ခနျ့နဲ့ စတငျ တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက တရုတျပွညျရဲ့ ဆကျသှယျရေးကို နိုငျငံခွားနညျးပညာကုမ်ပဏီတှကေသာ တညျဆောကျနတောဖွဈတဲ့အတှကျ ပွညျတှငျး တယျလီကှနျကုမ်ပဏီတခုအဖွဈ အစားထိုးဖို့ရညျရှယျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ တယျလီကှနျဆိုငျရာ ပစ်စညျးထုတျလုပျမှုမှာ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးကုမ်ပဏီဖွဈလာသလို အရောငျးရဆုံး စမတျဖုနျးတံဆိပျမှာလညျး ကမ်ဘာ့နံပါတျ ၂ နရောမှာ ရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။
ရုံးခြုပျကတော့ တရုတျနိုငျငံ Shenzhen မှာ တညျရှိပါတယျ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံပေါငျး ၁၇၀ကြျောမှာ ရုံးခှဲပေါငျးထားရှိပွီး စမတျဖုနျး နဲ့ တယျလီကှနျနကျဝကျပိုငျးဆိုငျရာ ထုတျကုနျတှကေို အဓိက ထုတျလုပျရောငျးခနြသေလို ကမ်ဘာ့ဖုနျးအျောပရတောကုမ်ပဏီကွီးတှရေဲ့ ဖုနျးလိုငျးတညျဆောကျမှုကိုလညျး ဝနျဆောငျမှုပေးလြှကျရှိပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာ ဝနျထမျးပေါငျး ၁၈၈၀၀၀ နဲ့ လညျပတျနတေဲ့ Huawei ကုမ်ပဏီကွီးရဲ့ ဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၀၉ဘီလြံ ဖွဈပါတယျ။
မိုကျခရိုဆော့ဖျကုမ်ပဏီကိုတော့ ၁၉၇၅ ခုနှဈက ဘီဂိတျဈ နဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ Paul Allen တို့က ပူးတှဲတညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ micro-computer software ရဲ့ အတိုကောကျအဖွဈ Micro-Soft ဆိုပွီးနာမညျပေးခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့နာမညျအကွီးဆုံးနဲ့ တကမ်ဘာလုံးသိကွတဲ့ ထုတျကုနျကတော့ Windows ဖွဈပါတယျ။ ခနျ့မှနျးမှုတှအေရဆိုရငျတော့ Windows သုံးစှဲသူဦးရဟော ၁ဘီလြံထကျမနညျးရှိတယျလို့ ဆိုတာကွောငျ့ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ ကမ်ဘာပျေါမှာ နထေိုငျတဲ့ လူ ၈ယောကျမှာ ၁ယောကျနှုနျးဟာ Windows ကို သုံးစှဲနတေယျလို့ ဆိုရမှာပါ။
မိုကျခရိုဆော့ဖျကုမ်ပဏီဟာ ဆော့ဝဲ ၊ ဟာ့ဒျဝဲ ၊ မိုဘိုငျး ၊ Cloud computing ၊ ဗီဒီယိုဂီမျး ၊ လူမှုကှနျယကျဝနျဆောငျမှု ၊ အငျတာနကျ စတဲ့နယျပယျပေါငျးမြားစှာမှာ ထုတျကုနျပေါငျးမြားစှာကို ထုတျလုပျရောငျးခြ ဝနျဆောငျမှုပေးလြှကျရှိပါတယျ။ ရုံးခြုပျကတော့ ဝါရှငျတနျ Redmond မွို့ Microsoft campus မှာ တညျရှိပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈစာရငျးအရ မိုကျခရိုဆော့ဖျကုမ်ပဏီဟာ ဝနျထမျးပေါငျး ၁၃၁၀၀၀ ဦးရှိပွီး ဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၁၀ဘီလြံဖွဈပါတယျ။
၄။ Alphabet Inc.
ကမ်ဘာ့အကွီဆုံးကုမ်ပဏီစာရငျးရဲ့ နံပါတျ ၄နရောမှာ ရှိနတောကတော့ Alphabet နညျးပညာကုမ်ပဏီဖွဈပါတယျ။ ဒီလောကျကွီးတဲ့ကုမ်ပဏီရဲ့ နာမညျဟာ ငါတို့နဲ့မရငျးနှီးပါလားလို့ မထငျလိုကျပါနဲ့။ Alphabet ဆိုတာ အားလုံးနဲ့ရငျးနှီးပွီးဖွဈတဲ့ Google ကုမ်ပဏီပဲ ဖွဈပါတယျ။ Alphabet ကုမ်ပဏီအဖွဈ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ ပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့တာဖွဈပွီး ဂိုဂဲကိုတော့ ဌာနခှဲတခုအဖွဈ Google LLC ဆိုပွီးထားရှိပါတယျ။ ဂိုဂဲကို ၁၉၉၆ ခုနှဈတုနျးက PhD ကြောငျးသားတှဖွေဈတဲ့ Larry Page နဲ့ Sergey Brin တို့က ပူးပေါငျးတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ရုံးခြုပျကတော့ ကယျလီဖိုးနီးယား Mountain View မှာတညျရှိတဲ့ Googleplex ဖွဈပါတယျ။
ဂိုဂဲနဲ့ပတျသကျသမြှထုတျကုနျတှအေပွငျ ဇီဝနညျးပညာ ၊ ငှကွေေးရငျးနှီးမွုပျနှံမှု ၊ IA ၊ ဖိုကျဘာအငျတာနကျ ၊ နညျးပညာဆိုငျရာအခွခေံအဆောကျအအုံမြားဆောကျလုပျခွငျး စတဲ့လုပျငနျးမြားစှာကို လုပျကိုငျလြှကျရှိပါတယျ။ ဝနျထမျးပေါငျး ၁၁၈၈၉၉ ဦးရှိနတေဲ့ Alphabet ကုမ်ပဏီရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၃၇ ဘီလြံဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးနညျးပညာကုမ်ပဏီစာရငျးရဲ့ တတိယနရောမှာ ရပျတညျနတောကတော့ ထိုငျဝမျနညျးပညာ ကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ Foxconn ဖွဈပါတယျ။ Foxconn ဆိုတဲ့နာမညျဟာ ကြှနျတျောတို့နဲ့ သိပျမရငျးနှီးဘူးလို့ထငျရပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့သိနကွေတဲ့ အိုငျဖုနျး ၊ အိုကျပတျ ၊ ဘလူးဘယျရီ ၊ Kindle ၊ Nintendo ၊ နိုကီယာ ၊ Xiaomi ၊ PS3၊ PS4စတဲ့နာမညျကွီးတံဆိပျတှကေိုရဲ့ ထုတျကုနျတှကေို Foxconn ရဲ့ စကျရုံတှကေနေ ထုတျလုပျပေးနတောဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Foxconn ဟာ အီလကျထရောနဈထုတျကုနျ ထောကျပံ့ထုတျလုပျမှုမှာ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးကုမ်ပဏီဖွဈနတောပါ။ Foxconn ကို ၁၉၇၄ ခုနှဈမှာ Terry Gou က Hon Hai Precision စကျမှုကုမ်ပဏီအဖွဈတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အီလကျထရောနဈဆိုငျရာထုတျကုနျပေါငျးမြားစှာ နဲ့ ကှနျပြူတာ chips တှကေို ထုတျလုပျပေးလြှကျရှိတဲ့ ဒီကုမ်ပဏီရဲ့ရုံးခြုပျကတော့ နယူးတိုငျပမွေို့က Tucheng မှာတညျရှိပါတယျ။ တရုတျမှာတငျ စကျရုံကွီးပေါငျး ၁၂ခုရှိနတေဲ့ Foxconn ဟာ ကမ်ဘာ့ဝနျထမျးအမြားဆုံး ကုမ်ပဏီတခုလညျး ဖွဈနပွေီး ဝနျထမျးဦးရေ ၆၆၇၆၈၀ ဦး ရှိနပေါတယျ။ ကမ်ဘာတဝှမျးရောငျးခရြတဲ့ အီလကျထရောနဈပစ်စညျးစုစုပေါငျးရဲ့ ၄၀% ခနျ့ကို Foxcoon ကုမ်ပဏီရဲ့ စကျရုံတှကေပဲ ထုတျလုပျနတောဖွဈပါတယျ။ ဒီကုမ်ပဏီရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၇၅.၆ဘီလြံ ဖွဈပါတယျ။
၂။ Samsung Electronics
ဆမျဆောငျးကုမ်ပဏီကတော့ ကြှနျတျောတို့နဲ့ ရငျးနှီးပွီးဖွဈပါတယျ။ ဆမျဆောငျးပငျမကုမ်ပဏီကွီးကိုတော့ ၁၉၃၈ ခုနှဈကတညျးက စတငျတညျထောငျခဲ့ပွီး ငါးခွောကျ ၊ စားသောကျကုနျ နဲ့ အထညျလိပျလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျခဲ့တာပါ။ Samsung Electronics ကုမ်ပဏီကိုတော့ ၁၉၆၉ ခုနှဈမှာ ထပျမံတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈရဲ့ အီလကျထရောနဈပစ်စညျးအရောငျးခရြဆုံး ကုမ်ပဏီဖွဈပွီး အကွီးဆုံး နညျးပညာကုမ်ပဏီစာရငျးမှာတော့ ဒုတိယဖွဈပါတယျ။ ဆမျဆောငျးအီလကျထရောနဈကုမ်ပဏီရဲ့ ရုံးခြုပျကတော့ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံ Suwon မွို့မှာ တညျရှိပါတယျ။
ထုတျကုနျတှအေဖွဈ အီလကျထရောနဈပစ်စညျးမြား ၊ ကြှနျပြူတာ နဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြား ၊ memory chips ၊ စမတျဖုနျး ၊ Semiconductor ၊ ကငျမရာ ၊ LCD နဲ့ LED panels တှကေို ထုတျလုပျရောငျးခလြှကျရှိပါတယျ။ memory chips နဲ့ Semiconductor ထုတျလုပျမှုမှာလညျး ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ကုမ်ပဏီအဖွဈရပျတညျနပေါတယျ။ ဆမျဆောငျးအီလကျထရောနဈရဲ့ ဝနျထမျးစုစုပေါငျး ၃၀၉၆၃၀ဦး ရှိနပွေီး ၂၀၁၉ ခုနှဈဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၂၁.၅ဘီလြံဖွဈပါတယျ။
၁။ Apple Inc.
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးနညျးပညာကုမ်ပဏီစာရငျးရဲ့ နံပါတျ ၁နရောမှာရှိနတောကတော့ Apple ကုမ်ပဏီပဲ ဖွဈပါတယျ။ Apple ကုမ်ပဏီကို လှနျခဲ့တဲ့ ၄၄နှဈခနျ့က Steve Jobs ၊ Steve Wozniak နဲ့ Ronald Wayne တို့က ပူးတှဲတညျထောငျခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ စတငျတညျထောငျစဉျက Apple ကှနျပြူတာတှကေို အဓိကထုတျလုပျရောငျးခခြဲ့ပွီး ပထမဆုံးဖုနျးအနနေဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ မိုတိုရိုလာ နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ROKR E1 ဖုနျးကို ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ iTunes ကို အသုံးပွုတဲ့ ပထမဆုံးဖုနျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၇ ခုနှဈမှာတော့ Iphone ကို ကိုယျပိုငျထုတျလုပျကာ စမတျဖုနျးလောကကို စတငျတခတျေဆနျးစခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Apple ကုမ်ပဏီရဲ့ ရုံးခြုပျကတော့ ကယျလီဖိုးနီယား Cupertino မွို့မှာတညျရှိပါတယျ။ MacOS နဲ့ I devices တှထေုတျလုပျရောငျးခလြကျြရှိပွီး iCloud ၊ iTunes Store နဲ့ Mac App Store စတဲ့အှနျလိုငျးဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးတှကေိုလညျး လုပျကိုငျပါတယျ။ Apple ကုမ်ပဏီဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ US ရဲ့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၁ထရီလီယံတနျတဲ့ ပထမဆုံးကုမ်ပဏီဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈစာရငျးအရ Apple ကုမ်ပဏီမှာ ဝနျထမျးပေါငျး ၁၃၂၀၀၀ ဦးရှိနပွေီး ဝငျငှကေတော့ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၆၅.၆ဘီလြံ ဖွဈပါတယျ။
———– —— ——–
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး ၁၀ ခု
ယနေ့အချိန်မှာတော့ နည်းပညာဟာ ကမ္ဘာကြီးကိုမောင်းနှင်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးရဲ့ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲ ဆော့ဝဲ ၊ အီလက်ထရောနစ် ၊ အင်တာနက် ၊ ဆက်သွယ်ရေး စတဲ့နည်းပညာတွေဟာ အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီတခါတော့ နည်းပညာခေတ်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ယနေ့ခေတ်ရဲ့ အကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး ၁၀ခု (၂၀၁၉ ခုနှစ် ဝင်ငွေစာရင်း အရ) ရဲ့အကြောင်းကို ကို ဗသုသုတ အနေနဲ့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
နံပါတ် ၁၀ မှာ ရပ်တည်နေတာကတော့ ဂျပန်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ ဆိုနီကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရောနစ် ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်း ၊ ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် နဲ့ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ဆိုနီကုမ္ပဏီကြီးကို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၇၄နှစ် (၁၉၄၆ ခုနှစ်) ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ရုံးချုပ်ကတော့ မြို့တော် တိုကျိုရဲ့ Minato မှာ အခြေစိုက်ပါတယ်။
နည်းပညာ ထုတ်ကုန်တွေကိုသာမက အာမခံ ၊ ဘဏ် ၊ ကြော်ငြာအေဂျင်စီ နဲ့ နက်ဝက်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုမှာ ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၁၄၄၀၀ ဦးခန့် ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုနီကုမ္ပဏီရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၈ဘီလျံ ဖြစ်ပါတယ်။
IBM ရဲ့ အရှည်ကောက်က International Business Machines Corporation ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ အကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတခုဖြစ်ပြီး ရုံးချုပ်က နယူးယောက် Armonk မှာတည်ရှိပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၉နှစ်ကြာ သက်တမ်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ကာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ နိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းခွဲတွေရှိနေပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲ ဆော့ဝဲ ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နေသလို Cloud computing နဲ့ Artificial intelligence နယ်ပယ်တွေမှာလည်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၃၅၂၆၀၀ ဦး နဲ့ လည်ပတ်လျှက်ရှိတဲ့ IBM ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၉ . ၅ ဘီလျံဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် ၈ နေရာမှာရှိနေတာကတော့ လျှပ်စစ် ၊ အီလက်ထရောနစ် နဲ့ စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တွေမှာ ကမ္ဘာကျော်တံဆိပ်တခုအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နေတဲ့ Hitachi ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Hitachi ကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၁၀ခန့် (၁၉၁၀ခုနှစ်) ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးချုပ်တွေကတော့ တိုကျိုမြို့ Marunouchi နဲ့ Chiyoda-ku ရပ်ကွက်တွေမှာ ရှိနေပါတယ်။
အီလက်ထရောနစ် ၊ စက်မှု ၊ တယ်လီကွန် ၊ Power plants ၊ ဓာတ်လှေကား ၊ စက်လှေကားတွေသာမက စူပါကွန်ပျူတာတွေကိုပါ ထုတ်လုပ်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ဒါအပြင် ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ Consulting ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၃၀၇၂၀၅ ဦးနဲ့ လည်ပတ်လျှက်ရှိတဲ့ Hitachi ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၅.၅ ဘီလျံ ဖြစ်ပါတယ်။
Dell နည်းပညာကုမ္ပဏီကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်က Michael Dell ကတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ နောက်ထပ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတခုဖြစ်တဲ့ EMC Corporation နဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Dell EMC ဆိုပြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရုံးချုပ်ကတော့ အမေရိကန် တက်စ်ဆက်ပြည်နယ် Round Rock မှာ တည်ရှိပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ၊ စမတ်ဖုန်း ၊ တီဗီ၊ ဆာဗာ ၊ storage ၊ ဆော့ဝဲ နဲ့ နက်ဝက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းပေါင်းအနေနဲ့ ၁၅၇၀၀၀ ဦးရှိနေတဲ့ Dell ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၀ ဘီလျံ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Huawei ကတော့ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၆ မှာရှိနေပါတယ်။ Huawei ကုမ္ပဏီကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာ Ren Zhengfei က ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ခန့်နဲ့ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက တရုတ်ပြည်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကို နိုင်ငံခြားနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကသာ တည်ဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်း တယ်လီကွန်ကုမ္ပဏီတခုအဖြစ် အစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ တယ်လီကွန်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာသလို အရောင်းရဆုံး စမတ်ဖုန်းတံဆိပ်မှာလည်း ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၂ နေရာမှာ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးချုပ်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံ Shenzhen မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ကျော်မှာ ရုံးခွဲပေါင်းထားရှိပြီး စမတ်ဖုန်း နဲ့ တယ်လီကွန်နက်ဝက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်တွေကို အဓိက ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသလို ကမ္ဘာ့ဖုန်းအော်ပရေတာကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ဖုန်းလိုင်းတည်ဆောက်မှုကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၈၈၀၀၀ နဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ Huawei ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၉ဘီလျံ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီကိုတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်က ဘီဂိတ်စ် နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ Paul Allen တို့က ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ micro-computer software ရဲ့ အတိုကောက်အဖြစ် Micro-Soft ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးနဲ့ တကမ္ဘာလုံးသိကြတဲ့ ထုတ်ကုန်ကတော့ Windows ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းမှုတွေအရဆိုရင်တော့ Windows သုံးစွဲသူဦးရေဟာ ၁ဘီလျံထက်မနည်းရှိတယ်လို့ ဆိုတာကြောင့် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေထိုင်တဲ့ လူ ၈ယောက်မှာ ၁ယောက်နှုန်းဟာ Windows ကို သုံးစွဲနေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီဟာ ဆော့ဝဲ ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ ၊ မိုဘိုင်း ၊ Cloud computing ၊ ဗီဒီယိုဂီမ်း ၊ လူမှုကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှု ၊ အင်တာနက် စတဲ့နယ်ပယ်ပေါင်းများစွာမှာ ထုတ်ကုန်ပေါင်းများစွာကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ရုံးချုပ်ကတော့ ဝါရှင်တန် Redmond မြို့ Microsoft campus မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်စာရင်းအရ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီဟာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၃၁၀၀၀ ဦးရှိပြီး ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၀ဘီလျံဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီဆုံးကုမ္ပဏီစာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၄နေရာမှာ ရှိနေတာကတော့ Alphabet နည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ နာမည်ဟာ ငါတို့နဲ့မရင်းနှီးပါလားလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ Alphabet ဆိုတာ အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးဖြစ်တဲ့ Google ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Alphabet ကုမ္ပဏီအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂိုဂဲကိုတော့ ဌာနခွဲတခုအဖြစ် Google LLC ဆိုပြီးထားရှိပါတယ်။ ဂိုဂဲကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တုန်းက PhD ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Larry Page နဲ့ Sergey Brin တို့က ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးချုပ်ကတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား Mountain View မှာတည်ရှိတဲ့ Googleplex ဖြစ်ပါတယ်။
ဂိုဂဲနဲ့ပတ်သက်သမျှထုတ်ကုန်တွေအပြင် ဇီဝနည်းပညာ ၊ ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ၊ IA ၊ ဖိုက်ဘာအင်တာနက် ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်း စတဲ့လုပ်ငန်းများစွာကို လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၁၈၈၉၉ ဦးရှိနေတဲ့ Alphabet ကုမ္ပဏီရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၇ ဘီလျံဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီစာရင်းရဲ့ တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေတာကတော့ ထိုင်ဝမ်နည်းပညာ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Foxconn ဖြစ်ပါတယ်။ Foxconn ဆိုတဲ့နာမည်ဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ သိပ်မရင်းနှီးဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့သိနေကြတဲ့ အိုင်ဖုန်း ၊ အိုက်ပတ် ၊ ဘလူးဘယ်ရီ ၊ Kindle ၊ Nintendo ၊ နိုကီယာ ၊ Xiaomi ၊ PS3၊ PS4စတဲ့နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေကိုရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို Foxconn ရဲ့ စက်ရုံတွေကနေ ထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Foxconn ဟာ အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန် ထောက်ပံ့ထုတ်လုပ်မှုမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်နေတာပါ။ Foxconn ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ Terry Gou က Hon Hai Precision စက်မှုကုမ္ပဏီအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ပေါင်းများစွာ နဲ့ ကွန်ပျူတာ chips တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးလျှက်ရှိတဲ့ ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ရုံးချုပ်ကတော့ နယူးတိုင်ပေမြို့က Tucheng မှာတည်ရှိပါတယ်။ တရုတ်မှာတင် စက်ရုံကြီးပေါင်း ၁၂ခုရှိနေတဲ့ Foxconn ဟာ ကမ္ဘာ့ဝန်ထမ်းအများဆုံး ကုမ္ပဏီတခုလည်း ဖြစ်နေပြီး ဝန်ထမ်းဦးရေ ၆၆၇၆၈၀ ဦး ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရောင်းချရတဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းစုစုပေါင်းရဲ့ ၄၀% ခန့်ကို Foxcoon ကုမ္ပဏီရဲ့ စက်ရုံတွေကပဲ ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇၅.၆ဘီလျံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆမ်ဆောင်းကုမ္ပဏီကတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရင်းနှီးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းပင်မကုမ္ပဏီကြီးကိုတော့ ၁၉၃၈ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ငါးခြောက် ၊ စားသောက်ကုန် နဲ့ အထည်လိပ်လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။ Samsung Electronics ကုမ္ပဏီကိုတော့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ ထပ်မံတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းအရောင်းချရဆုံး ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီစာရင်းမှာတော့ ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းအီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီရဲ့ ရုံးချုပ်ကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Suwon မြို့မှာ တည်ရှိပါတယ်။
ထုတ်ကုန်တွေအဖြစ် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ၊ ကျွန်ပျူတာ နဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ memory chips ၊ စမတ်ဖုန်း ၊ Semiconductor ၊ ကင်မရာ ၊ LCD နဲ့ LED panels တွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျှက်ရှိပါတယ်။ memory chips နဲ့ Semiconductor ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဆမ်ဆောင်းအီလက်ထရောနစ်ရဲ့ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း ၃၀၉၆၃၀ဦး ရှိနေပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၁.၅ဘီလျံဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနည်းပညာကုမ္ပဏီစာရင်းရဲ့ နံပါတ် ၁နေရာမှာရှိနေတာကတော့ Apple ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Apple ကုမ္ပဏီကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၄၄နှစ်ခန့်က Steve Jobs ၊ Steve Wozniak နဲ့ Ronald Wayne တို့က ပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ စတင်တည်ထောင်စဉ်က Apple ကွန်ပျူတာတွေကို အဓိကထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီး ပထမဆုံးဖုန်းအနေနဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ မိုတိုရိုလာ နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ROKR E1 ဖုန်းကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ iTunes ကို အသုံးပြုတဲ့ ပထမဆုံးဖုန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ Iphone ကို ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ကာ စမတ်ဖုန်းလောကကို စတင်တခေတ်ဆန်းစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ ရုံးချုပ်ကတော့ ကယ်လီဖိုးနီယား Cupertino မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ MacOS နဲ့ I devices တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပြီး iCloud ၊ iTunes Store နဲ့ Mac App Store စတဲ့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ Apple ကုမ္ပဏီဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ US ရဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ထရီလီယံတန်တဲ့ ပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်စာရင်းအရ Apple ကုမ္ပဏီမှာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၃၂၀၀၀ ဦးရှိနေပြီး ဝင်ငွေကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၆၅.၆ဘီလျံ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: techworld companiesworld knowledge